Semalt - Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Kuramba Wakachengeteka Kubva Petya Malware
Mavhiki mushure mokunge WannCry ransomware yakarwisa mazana kuzviuru zvemakombiyuta emakombiyuta munyika yose, yakafanana nemarware inonzi Petya yakawanikwa paIndaneti. Petya akarwisa nhamba yakawanda yebhangi, hurumende uye mahofisi ehurumende yeUkraine uye makambani emarudzi akawanda munyika yose. Kungofanana neWannaCry kutambudzwa, Petya akarwisa vanhu vakasiyana-siyana, uye avo vakanyunyuta vakanyunyuta kuti zvigadzirwa zvavo uye mafaira zvakashata - ventilatori da soffitto primo prezzo. Vashandi vacho vakakumbira $ 300 kusvika ku $ 500 muBitcoin vasati vasvika vangawana zvakare kuwana makombiyuta uye mafoni.
Ryan Johnson, Mutungamiri Mukuru wekutengesa Semalt , anogona kukutungamirira kuburikidza nekudzivirira kwaPeta.
Inonyanya kutenda kuti kushorwa kwakadaro kunoshandisa EternalBlue zvinoshandiswa kuburikidza nehutachiwana mu Microsoft Windows. Nokudaro, kambani iyi yekambani yakabudisa mazano akawanda uye yakabvunza vashandi vayo kuti vave nechokwadi chekudzivirira kwavo kuburikidza nekuvandudza mapurogiramu avo uye software nguva dzose. Kurwiswa kwakafanana naPetya uye WannaCry kwave kwakajairika, uye makambani anofanira kudzidzisa vashandi vavo kuti vave nechokwadi chekuchengetedzwa kwavo paIndaneti.
Kudzivirira rudzikinuro rwekudzivirirwa kwekambani
Jonathan Care kubva kuGartner akapa mazano pamusoro pekudzivirira malware uye Petya kurwisa nekudzivisa se sangano. Anotaura kuti Petya inzira inotyisa yemarware. Icho chakasiyana zvikuru uye chakaoma kupfuura WannCry. Nzira yakakurumbira yekuisunungura kune imwe nzira ndeyokutapurirwa maimeri kana kuvhara mazano. Zvisinei, zvinoratidzika sePetya anoshandisa kushandiswa kwezvirwere kubva kune purogiramu yakavhiringidza sangano sezvo chirwere chacho chekutanga chiri rudzi rusinganzwisisi rwevector. Vaseki vanoda kukubira ruzivo rwenyu pachavo uye kukumbira mubhadharo..Kana zvisina kudaro, ivo vanotyisidzira kutakura zvinhu zvinonyangadza pamakombiyuta enyu. Petya ane kodzero yekunyora mafaira ako. Kana zvangoitika, haugoni kubvisa zvinyorwa zvepafaira rako kusvikira wagadzirira kubhadhara rudzikinuro. Isu tinonzwawo kuti Petya haatoreri mafaira pachayo. Panzvimbo pacho, inovhara mafaira ako uye maoko pamusoro pebasa rekushongedza kune mamwe mapurogiramu.
Mr. Kuchengeta zvakare kunotaura kuti makambani haafaniri kufunga nezvePetya sechinhu chinovaka. Izvozvo ndezvokuti Petya inzira yekugadzirisa uye inogona kukuvadza kombiyuta yako kana chipangizo chemufaira mumaminitsi. Iwe unofanirwa kuziva zvivako zvekugadzirisa majekiseni, zvakasakadzwa uye zvishandiso zvewebhu zvinogona kunge zvine malware uye mavairasi. Zvingava zvakanaka kana ukaedza Gartner's Adaptive Security model iyo inotipa tsanangudzo yekuti tingachengeteka sei paIndaneti.
Ndiregei pano ndikuudzei kuti iyo malware uye Petya vanoda kuti vatungamiri vagovana kodzero dzavo dzemakombiyuta. Vanokunyengedza kuti upe ruzivo urwu kana kukumanikidza kuti uite kuti vave nechiremera chekuwana chida chako. Mushandisi akafanirwa haafaniri kumbomira pane zvinyorwa zve email zvakachengetedzwa zvingakanganisa paIndaneti. Mhando dzakasiyana-siyana dzekushanda kweWindows zvirongwa zvakagadzirirwa kudzoka zvakare Petya pose pazvinenge zvichidiwa. Izvo kwauri kana iwe iwe unogona kuigonesa kana kuvhiringidza hupenyu hwose.
Chengetedza sangano rako
Mr. Kuchengeta kunotaura kuti isu tinofanira kutora matsva eMicrosoft matsva uye tadzivirira SMBv1 nekudzivirira malware uye mavairasi. Zvinokosha zvakare kuti tidzidzise isu pachedu. Pasina iyo, hatigoni kuramba takachengetedzwa paIndaneti. Tinofanirwawo kunge tine shanduro dzekupedzisira dzezvirongwa uye maitiro ekushanda akaiswa pane zvigadziriro zvedu. Tinofanira kuva nemapepa ekuchengetedza emafaira ese uye mafaira, uye aya anofanira kuchengetwa kuma diski emunharaunda.